कमल थापाको आन्दोलन- विविधा - कान्तिपुर समाचार
चैत्र १६, २०७५ विमल निभा
काठमाडौँ — कुनै जमानाका बहुचर्चित महापञ्च कमल थापा आफ्नो एक अदत् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित बृहत जनआन्दोलनमा निस्किएका छन् । अचेल आन्दोलन यस्तै राजावादी, भूतपूर्व पञ्च र गणतन्त्र विरोधी (यहाँ म चलनचल्तीको मण्डले शब्दको प्रयोग गर्न गइरहेको छैन) मनुवाहरूका जिम्मामा आएको प्रतीत हुन्छ ।
यसको कारण के हो भने पुराना जनआन्दोलनकारीहरू यस कार्यबाट पुरै मुक्त भइसकेका छन् । त्यस समयका लाल कम्युनिस्टहरू सत्तामा बलियोसित विराजमान छन् भने ‘वेटिङ सत्ताधारी’ प्रतिपक्षका कांग्रेसी बन्धुहरू समानान्तर छाया सरकारमा । अब यिनीहरूलाई यस प्रकारको टुट्टा पर्ने जनआन्दोलन–सनआन्दोलनसँग के सरोकार हुनसक्छ ?
त्यसकारण यस क्षेत्रमा अनायास देखापरेको खालीपनाको क्षतिपूर्तिस्वरुप कमल थापाहरूलाई रुचि भए पनि अथवा नभए पनि आन्दोलन गर्नुपरेको छ । तर वर्तमानको नग्न यथार्थ के हो भने जति गरे पनि यिनीहरूका आन्दोलन नामक प्रयास व्यर्थ गइरहेको छ ।
यो ‘हातमा लागि शून्य’ मार्का असफल आन्दोलनको कारण के हुनसक्छ ? एउटा ठोस कारण त स्पष्टै छ । वास्तवमा जनआन्दोलन र कमल थापाहरूमा कुनै मेल छैन । र दुई बेमेलको मेल कदापि सम्भव हुँदैन । यो पूर्णतया विज्ञानसम्मत छैन । किनभने मैटर र एन्टीमैटरको जोडले अस्तित्वहीनताको भयानक विस्फोटलाई जन्माउँछ ।
यो सरल विज्ञान हो । र अर्को कारण पनि विज्ञानसँगै सम्बन्धित रहेको छ । हाम्रो अगाडि एक नभएर अनेक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरू दृश्यमान छन् । उदाहरणका लागि पशुपति शमशेर जबराको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, लोकेन्द्रबहादुर चन्दको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, प्रकाशचन्द्र लोहनीको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी इत्यादि ।
यिनीहरूमा टडकारोसँग देखापर्ने कमल थापाको ब्रान्डेड राष्ट्रिय प्रजातन्त्र त दृश्यपटलमा हाजिर छँदैछ । र यतिका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरू भएर पनि आन्दोलनचाहिंँ किन अघि नबढिरहेको होला ? यो चाखलाग्दो अनुसन्धानको विषय हुनसक्छ । मेरो सन्देह के हो भने कतै यिनीहरूका डीएनएमै आन्दोलन नभएको कुनै विशेष अवस्था त होइन ?
केही दिनदेखि मलाई के लागिरहेको छ भने आन्दोलनको शंखघोष गर्ने कमल थापाको विफलताको मुख्य कारण अर्को छ । यसमा उनको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उत्साहित भएर अघि सारेको खास–खास माग नै शतप्रतिशत दोषी हुनुपर्छ । यो पक्कापक्की हो । तपाई यसको मागतर्फ ध्यान दिनोस् ।
के हुन्, आन्दोलनकारी कमल थापाद्वारा प्रस्तुत मागहरू ? एक, हिन्दु धर्मको स्थापना र दुई, राजतन्त्रको पुनरागमन । र यही दुई मागको फलस्वरुप उनी दोहोरो संकटमा नराम्ररी फँसेका छन् । हो, कमल थापाको आन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्न नसक्नुको गाँठी कारण यही हो । र मेरो कुरामा विश्वास लाग्दैन भने एकपटक नेपाली कांग्रेस पार्टीतिर आफ्नो दृष्टि दिनोस् । त्यहाँ आजभोलि जोरसोरले घटित भइरहेको छ ?
यसको महासचिव शशांक कोइराला यत्र, तत्र र सर्वत्र हिन्दु धर्मको घनघोर वकालत गरेर हिंँडिरहेका छन् । अब नेपाली कांग्रेस पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले यसलाई पटक्कै स्वीकार गरिरहेका छैनन्, यो बेग्लै कुरो हो । तर यो पनि त्यति सही कुरो होइन । वस्तुतः सभापतिको आशय के हो भने महासचिव शशांकसहित तमाम कांग्रेसीहरूले देउवालाई नै आराध्यदेव ब्रह्मा, विष्णु र महेश माने उनलाई हिन्दु धर्मप्रति कुनै नाइनास्ती छैन ।
र यसमा खानदानी कांग्रेसी कोइरालाहरूका कुनै पनि किसिमको मञ्जुरीको प्रश्नै छैन । किनभने नेता विश्वेश्वप्रसाद कोइरालाको पालादेखि नै एकमाक्र कांग्रेसी ‘ईश्वर’ लाई चिन्हित गरिसकिएको छ । र त्यो सर्वशत्तिमान कांग्रेसी ‘ईश्वर’ कोइराला वंश बाहिरको हुनै सक्दैन । तसर्थ गैरकोइरालाहरूले यसमा हकदाबी नगर्नु नै कांग्रेसी धर्म हुनेछ ।
माननीय कमल थापाको आन्दोलनको पहिलोमात्र हिन्दु धर्मलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीले सहजै हातलागी पारेको छ भने दोस्रो माग पनि सर्वथा संकटमुक्त छैन । यसलाई वर्तमान सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सरकारी कमरेडहरूले बलात् खोसेका छन् । तपाई भन्नुहोला– कम्युनिस्टहरू त विशुद्ध गणतन्त्रवादी हुन्छन् ।
त्यसैले कमल थापाको दोस्रो माग राजतन्त्रको पुनरागमनसँग यिनीहरूको के सम्बन्ध हुनसक्छ ? यो पनि ठिकै हो । तर सबभन्दा ज्यास्ती ठिक के हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कमरेडहरू विलकुलै गणतन्त्रवादी देखा परिरहेका छैनन् । यो अप्रमाणिक तथ्य होइन । अहिले नेपालमा शाहतन्त्रका स्थापक पृथ्वीनारायण शाहलाई आत्मैदेखि को मान्छन् ? यिनै सत्ताधारी कमरेडहरू ।
हाम्रा प्रधानमन्त्री कमरेड खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई कतै कुनै पृथ्वीनारायणको सालिकजस्तो देखिनु हुन्न, तुरुन्तै बडेमानको फूलमाला पहिर्‍याइहाल्छन् । चाहे त्यो अस्तिनको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बडो प्राज्ञभक्तिका साथ स्थापित पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा होस् अथवा अन्यत्र कतैको । के फरक पर्छ ? र ‘पृथ्वी जयन्ती’ आउनासाथ यी सरकारी कमरेडहरू परम महेन्द्रीय मुद्रामा आउँछन् । र भक्तिविभोर भई राजतन्त्रमय महाउत्सव मनाउन थाल्छन् ।
कहाँसम्म भने वर्षभरि सम्पूर्णतः मौन धारण गरेर बसेका नेकपाका बौद्धिक नेता कमरेड मोदनाथ प्रश्रितसमेत एकाएक जागृत हुन्छन् । उनी यही दिनमा माक्र सत्रिय हुने गर्छन् । अतः कमरेड प्रश्रित पृथ्वीनारायणप्रेमी कम्युनिस्टहरूका प्रिय ‘प्रतीक पुरुष’ हुन् । अर्थात् कमरेड मोदनाथ प्रतीक । (प्रश्रित होइन) ।
अब भन्नोस्, आफ्ना दुवै माग– हिन्दु धर्मको स्थापना र राजतन्त्रको पुनरागमन– यसरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षद्वारा बलजफ्ती अपहरित भएको अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका आन्दोलनकारी नेता विचरा कमल थापाले कसरी आन्दोलन अघि बढाउन सक्छन् त ? यो असम्भव छ ।
प्रकाशित : चैत्र १६, २०७५ ०७:५७
तीन तलाकको त्रास
चैत्र १६, २०७५ लीला लुइँटेल
काठमाडौँ — हरेक राष्ट्र वा जातिको सामाजिक जीवन, राजनीति, अर्थनीति, चालचलन, गीत, नृत्य, वाद्यवादन, चाडबाड, जात्रा, कला आदिमा प्रतिविम्बित हुने तथा तिनका कलाकौशल, बौद्धिक विकास आदि झल्काउने सम्पूर्ण क्रियाकलापको परिष्कृत रूपलाई संस्कार भन्ने गरिन्छ ।
चीर कालदेखि देशकाल सापेक्ष भई आन्तरिक, वैचारिक एवं परम्परागत धारणाका रूपमा विकसित हुँदै आएको तथा जीवनशैलीमा पचिसकेको रहन–सहन, आचार–विचार सम्बन्धी भावना र तिनका माध्यमबाट कुनै राष्ट्र, वर्ग, समाज, जातिआदिको पहिचान गराउने मूल्य–मान्यता, भौतिक अभिव्यक्ति, परम्परित, रीतिरिवाज, चालचलन,धर्म, संस्कार, आस्था, व्यवहार, इतिहास, पूर्वजन्म, पुनर्जन्म, कर्म, भाग्य, ईश्वरीयता, लोकोक्ति, लोकप्रचलन आदिको सामूहिक नाम नै संस्कार हो । कला, भाषा, साहित्य, दर्शन, धर्म, नीति, इतिहास आदि विभिन्न विषय पनि संस्कारभित्र समेटिन सक्छन् । मानिसलाई अनुशासनभित्र रहन प्रेरितगर्नु नै संस्कारको अभीष्ट भएकाले यो कर्म पनिहो र आस्था पनि ।
संस्कार कुनै जातिको सिर्जनात्मक खुबीको परिचायक र समाजका निम्ति अनियन्त्रणीय आवश्यकता पनि हो । आफ्नो संस्कारमा हरेक मानिसले सन्तुष्टि, सुनिश्चितता र स्थायित्वका साथै जीवनयापनमा सहजता प्राप्त गर्न सक्छ । यसको निर्माण एक दिनमा नभएर सामाजिक–ऐतिहासिक विकासक्रममा खास समाजको सामूहिक व्यवहारका अनुभवका आधारमा हुन्छ र निरन्तर अविच्छिन्न सांस्कारिक परम्परा स्थापित हुँदै जान्छ ।
कुनै व्यक्तिको भौगोलिक अवस्थिति, रहन–सहन, लवाइ–खवाइ, शिक्षादीक्षा आदिजस्ता सन्दर्भले संस्कार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् । यिनै कारणबाट सांस्कारिक विविधताको जन्म हुन्छ । समयसँगै परिवर्तनशील हुनाका साथै संस्कार एक पुस्ताबाट अर्को फुस्तामा हस्तान्तरणीय हुने गुणयुक्त हुन्छ । समयत्रममा देखिने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखापर्ने राजनीतिक–आर्थिक घटना तथा परिवर्तनले पनि संस्कारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन् ।
सामाजिक प्रचलनबोधक संस्कारलाई वैभिन्य तुल्याउन स्थान, समय, जात, धर्म आदिले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । कुनै ठाउँ, समय, जात र धर्मको संस्कार अर्को ठाउँ, समय, जात र धर्मका लागि बेठिक, विपरीत र अस्वीकार्यसमेत हुने देखिन्छ । यसका साथै राम्रो–नराम्रो, असल–खराब, ठिक–बेठिक भन्ने कुरा पनि समय एवं स्थान सापेक्षित हुन्छन् ।
कुनै स्थान वा जाति विशेषको संस्कृति अर्को स्थान वा जाति विशेषका लागि अनौठो र अग्राह्य हुन पनि सक्छ । तापनि सत्य, अहिंसा, परोपकार, त्याग, बलिदान, मानवतावादी भावनाजस्ता विषय–वस्तुमा आधारित संस्कारचाहिँ सर्वपक्षीय, सर्वजातीय, सर्वराष्ट्रिय, सार्वभौम र सार्वकालिक हुन्छ । अझ स्पष्ट रूपमा भन्दा मानवतावादी आदर्श बोकेको संस्कार नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, दीर्घजीवी, शाश्वत् तथा सत्यका निकट हुन्छ ।
संसारमा चलेका अनेक संस्कारमध्ये इस्लामिक कानुनमा रहेको तीन तलाकको प्रथा पनि एक हो । पितृसत्तात्मक मानसिकताको बोलवाला रहेको मुस्लिम समुदायमा धर्म, रीतिरिवाज वा परम्पराको आडमा महिलामाथि अनेक प्रकारका कुप्रथा थोपरिएका छन् । एक्काइसौँ शताब्दीको विद्युतीय सञ्चारको युगमा समेत कुनै पनि दृष्टिबाट औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने अनि त्यसका बारे सकारात्मक व्याख्या गर्न नसकिने अति हास्यास्पद र उदेकपूर्ण संस्कार मुस्लिम महिलाले बेहोर्दै आएका छन् ।
कुनै पतिले आफ्नी पत्नीलाई छोड्न चाह्यो भने वा उसले वैधानिक रूपमै सम्बन्धविच्छेद गर्न चाह्यो भने तीन पटकसम्म मौखिक रूपमै ‘तलाक’ उच्चारण गरे सम्बन्धविच्छेद हुने कुप्रचलन मुस्लिम समुदायमा छ । धार्मिक मान्यतामा आधारित भनिएको यस तीन तलाकको व्यवस्थाले लामो समयदेखि महिलाहरू अन्यायमा परेक छन् । यस्तो कुप्रथा महिलामाथि हुने गरेका अपमानको पराकाष्ठा हो ।
यस्तो अमानवीय क्रियाकलापको प्रावधान कुरानमा नै भएको हवाला दिँदै नेपालमा पनि मुसलमान युवकहरूले आफ्ना पत्नीलाई तलाक दिने गरेको पाइन्छ । अझ केही समययता वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवकहरूले टेलिफोन गरी उतैबाट तलाक दिनथालेको तथ्यबाहिर आएको छ ।
राज्यले सबै धर्म, जाति एवं संस्कारको सम्मान गर्नुपर्छ । तर सिङ्गो मानवकै उपहास गर्ने यस्ता संस्कार नामधारी कुरीतिलाई चाहिँ जरैदेखि उखेलेर फाल्नुपर्छ । पहिलो कुरा यो व्यवस्था धार्मिक ग्रन्थ कुरानमा उल्लेख नभएको तथ्य बाहिर आइसकेको छ ।
तीन तलाक प्रथा विरुद्ध विधेयक पास गर्ने क्रममा लामो समयको अध्ययन र विभिन्न धर्मका गुरुकै गहन परामर्शबाट यो प्रावधान कुरानको मूल भावना र मर्म विरुद्ध भएको भन्दै यसलाई अवैधानिक र अमान्य ठहर गर्दै पुरुषले महिलामाथि निर्मम रूपले थोपर्ने यस खाले एकतर्फी अन्यायलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक घोषणा गरिसकेको छ । पीडित मुस्लिम महिलालाई मुक्ति दिने सर्वोच्च अदालतको प्रशंसित तीन तलाक खारेजीको वर्तमान फैसलाको सर्वत्र स्वागत गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ यो धर्मशास्त्र भित्रकै व्यवस्थाहो भने पनि समय–सापेक्ष ढङ्गले धर्मशास्त्रएवं संस्कार परिष्कार गर्दै जानुपर्छ । यस्ताविवेकहीन, लज्जास्पद एवं मानवता विरोधी क्रियाकलापको अन्त्य तुरुन्तै हुनुपर्छ । नेपालमा
केही समयअघि प्रचलनमा रहेको सतीप्रथा ररजस्वला नहुँदै छोरीको कन्यादान गर्नुपर्ने सन्दर्भपनि संस्कारकै रूपमा व्याख्या गरिन्थे । तरयस्ता कुप्रथा हाम्रा अहिलेका छोरीहरूका लागि एकादेशको कथा बनिसकेका छन् ।
अझ हास्यास्पद कुरा त इस्लामिक कानुन अवलम्बन गर्ने मुस्लिम राष्ट्रको रूपमा परिचित पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा ‘तीन तलाक’को प्रावधान खारेज भइसक्दा पनि नेपालमा चाहिँ यस्तो कुरीतिको अवशेष देखिनु विवेकहीनता एवं लज्जाहीनताको पराकाष्ठा हो । किनकि संस्कार भनेकै मानव समाजले आफ्नो जीवनलाई विवेकशील, सुखमय र समृद्धिपूर्ण बनाउनका लागि हो, कसैलाई अन्यायको जाँतोमा पिस्न र अपमान गर्न होइन ।
यस उद्देश्य पूर्तिका निम्ति मानवको भौतिक वा आत्मिक विकासका निम्ति संस्कारहरूको निर्माण र विकास गर्ने हो । संस्कारहरूको निर्माणका क्रममै उसले पुराना एवं मानवता विरोधी क्रियाकलाप त्याग गर्दै समय–सापेक्ष आवश्यक क्रियाकलाप थप्दै जानुपर्छ र परम्परालाई निरन्तरता दिँदै जानुपर्छ । अन्यथा यो सुन्दर धर्ती बर्बर बस्तीमा परिणत हुन बेर लाग्दैन ।
नेपालका थुप्रै महिला यसबाट पीडित छन् भन्ने तथ्य बाहिर आइसकेपछि पनि सम्बन्धित समुदायको हकहितका लागि खोलिएका सङ्घ–संस्था निष्क्रिय देखिनु विडम्बना नै हो । अझ महिला आयोग तथा महिलाको हकहितका लागि आवाज उठाउनेहरूले यस खाले क्रियाकलापलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कारबाही अघि बढाउन ढिलो भइसकेको छ ।
यस्ता कुप्रथाहरू निमिट्यान्न पार्नाका लागि राज्यले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । यसका लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नभए तुरुन्तै नीति–नियम बनाएर यस प्रकारका अपराध रोकेर मुस्लिम समुदायका महिलालाई मानवका रूपमा जिउन सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित : चैत्र १६, २०७५ ०७:५५